prachand – Karnalisandesh
वाईसीएलको संयोजक र सहसंयोजक चयन
काठमाडौँ। वाईसीएलको पहिलो वैठकले संयोजकमा सुमन देवकोटालाई चयन गरेको छ। त्यस्तै सह–संयोजक सुबोधराज शेर्पाली बनेका छन्। मंगलबार अनुपम पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संयोजकमा देवकोटा र सह–संयोजकमा शेर्पालीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले हालको केन्द्रीय समितिलाई तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेको छ। तस्बिर: मुकुन्द कालिकोटे
काठमाडौँ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने सुझाव समावेश गरेको बुझिएको छ। शुक्रबार शीर्ष नेतालाई बुझाएको गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाल
पूर्वमाओवादीहरुले दिएको निवेदन आयोगद्वारा खारेज
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अवैधानिक भन्ने दाबी खारेज गरेको छ। एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खार
प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हो: केपी ओली
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै देशको राष्ट्रिय समस्या भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा आइतबार इमेज टेलिभिजनको हट सिट कार्यक्रममा प्रस्तोता जगदीश खरेलसँगको अन्तर्वातामा बताएका हुन्। उनले सिके राउत, विप्लवहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको भन्दै देशमा तनाव बढाउन नहुने बताए। ‘तनाव अति भयो देशमा। तनाव चाहिनेभन्दा ब
कांग्रेसको निर्णयले ओली सकसमा, अबको राजनीति कता?
काठमाडौँ। अन्ततः नेपाली राजनीतिले कोर्ष परिवर्तन गरेको छ। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरेपछि सिर्जित अस्थिरता हाल पनि कायम छ। तर, शुक्रबार बसेको प्रमुखप्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले नै ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेपछि अवस्था फरक हुने देखिन्छ। ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि अबको राजनीतिक कोर्ष कता जाला ? भन्ने चासो बढेको छ। केही दिन
‘प्रचण्डसँग सेना, हतियार छैन, किन डराउने?’
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हतियार र लडाकु दुवै नभएकाले कोही पनि नडराउने टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार रिपोर्टस् क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्नमा समय लगानी गरे। उनले भने, ‘केही मान्छेले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देशको राजनीति धमिल्याउन खोजेका छन्। के यो देश
सरकार गठनबारे प्रचण्डसामु देउवाको पूरानै सर्त
काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार भेट भएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने नैतिक दबाबमा रहेका दाहालले सत्ता समीकरणका लागि छलफल गर्न देउवासँग भेटेका हुन्। देउवासँगको भेटमा दाहालले पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए। उनले ओलीको विकल्पमा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव राखेको देउवानिकट एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार दाहालले
सत्ता समिकरण: ढुक्क ओली, प्रचण्ड सकसमा
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच त्रिपक्षीय रुपमा सहमति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो सत्ता टिकिरहनेमा ढुक्क देखिएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीभित्र शक्तिशाली देखिएका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाइ राख्नका लागि जसपालाई मात्र साथ लिने पुग्नेछ। त्यसका लागि जसपाको माग सम्बोधन गरेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क र
‘६० प्रतिशतभन्दा धेरैले नेताका कुरा पत्याउँदैनन्’
काठमाडौँ। राजनीतिक हिसाबले मुलुक गलत दिशातर्फ अघि बढिरहेको र त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको एक मत सर्वेक्षणले देखाएको छ। मिडिया अनुसन्धान र विकासमा क्रियाशील ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल’ नामक गैरनाफामूलक संस्थाले मुलुकका ५ हजार ८२ सर्वसाधारणमाझ गरेको सर्वेक्षणका ४४ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले मुलुक गलत राजनीतिक बाटामा अघि बढिरहेको बताएका हुन्। त्यसको मुख्य कारणका रूपमा उन